သွားဖက်ဆိုင်ရာ သမားတော်ရဲ့အကြံပြုချက်အရ သင့်ရဲ့သွားကျန်းမာရေးအတွက် ဘယ်တော့မှမလုပ်သင့်တဲ့ အရာ(၉) ချက် - Lifestyle Myanmar
Home Health & Beauty သွားဖက်ဆိုင်ရာ သမားတော်ရဲ့အကြံပြုချက်အရ သင့်ရဲ့သွားကျန်းမာရေးအတွက် ဘယ်တော့မှမလုပ်သင့်တဲ့ အရာ(၉) ချက်
သွားကျန်းမာရေးဟာ ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အလုံးစုံကျန်းမာရေးတွေထဲက အရေးအကြီးဆုံး အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
လူအတော်များများကတော့ သွားကျန်းမာရေးအတွက် ခံတွင်းသန့်ရှင်းရေုးကို လိုက်နာကြသော်လည်း သတိမထားတဲ့ အပြုအမူတချို့က သင့်အံသွားတွေရဲ့ ကျန်းမာရေးကို ဆိုးရွားစွာထိရောက်စေပါတယ်။ တကယ်လို့သင့်ရဲ့သွားတွေမှာ ပြဿနာရှိနေရင်လည်း သိပ်ပြီးစိုးရိမ်စရာ မလိုပါဘူး။ ယခုဖော်ပြမယ့် သွားဖက်ဆိုင်ရာသမားတော်ရဲ့ အကြံပေးတွေက သင့်အတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်။
၁။ အရောင်ရင့်တဲ့အရည်တွေကို များပြားစွာသောက်သုံးခြင်း
အရောင်ရင့်တဲ့ အရည်တွေမှာ pH ပမာဏအလွန်နည်းပါးစွာ ရှိနေပါတယ်။ ဒီလို နည်းပါးခြင်းဟာ အက်ဆစ်ဓာတ်ပိုမိုဖြစ်စေပြီး သွားတွေကိုဆိုးဆိုးဝါးဝါး ထိခိုက်စေပါတယ်။ ဒါကြောင့် pH ပမာဏနည်းပါးတဲ့အရည်တွေကို ရှောင်ကျဉ်ပြီး pH ပမာဏမြင့်မားတဲ့အရည်တွေကို ပိုမိုသောက်သုံးပေးပါ။
ကော်ဖီဟာ အရမ်းကိုအချဉ်ပေါက်စေပြီး အရောင်ရင့်တာကြောင့် သင့်ရဲ့သွားတွေကိုလည်း ဝါစေပါတယ်။ အလွန်အကျွံသောက်သုံးလျှင် သွားတွေပိုပြီး သိသိသာသာ အရောင်ပြောင်းလာတာကို တွေ့မြင်ရမှာပါ။ ဒါပေမယ့် သတင်းကောင်းကတော့ ကော်ဖီကြောင့်ဖြစ်တဲ့ သွားအစွန်းအထင်းတွေကို ချွတ်ရတာ အခြားအရည်တွေကြောင့် အစွန်းတွေကိုချွတ်ရတာထက် ပိုလွယ်ကြောင်း ဆရာဝန်တွေက ဆိုပါတယ်။
ဝိုင်အနီဟာ ဘယ်လောက်ထိစွန်းထင်းစေကြောင်း လူတိုင်းသိပြီးသားပါ။ ဝိုင်အနီရ့ အက်ဆစ်ဓါတ်က သင့်ရဲ့သွားတွေကို ပိုပြီးဝါကျင်စေနိုင်ပါတယ်။ ဆိုးဆေးတွေလည်း ပါဝင်တာကြောင့် အလွန်အမင်းသောက်သုံးမှုကို ဆင်ခြင်ပေးပါ။
ဝိုင်းအဖြူဟာ အဖြူရောင်ဖြစ်တဲ့အတွက် သင့်ရဲ့သွားတွေကို မထိခိုက်စေနိုင်ဘူးလို့ မထင်ပါနဲ့။ သူ့မှာရှိတဲ့အက်ဆစ်ဓါတ်က သွားရဲ့ကြွေလွှာတွေကို ပျက်စီးစေနိုင်ပါတယ်.
ရေခဲဝါးခြင်းဟာ ကျောက်တုံးကိုကိုက်သကဲ့သို့ သင့်ရဲ့သွားအတွက် အလွန်အမင်းထိခိုက်စေကြောင်း အမေရိကန်သွားဖက်ဆိုင်ရာ ပြောခွင့်ရသူတစ်ဦးက ဆိုပါ။ လူရဲ့သွားတွေဟာ အစားအစာတွေအတွက် သင့်တော်သော်လည်း ရေခဲဝါးခြင်းအတွက်တော့ လုံးဝမသင့်တော်ပါဘူး။ ဒီလိုမကြာခဏဝါးခြင်းကြောင့် သွားကိုက်ခြင်းနဲ့ တစ်ရှုးတွေပျက်စီးခြင်းတွေကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
၆။ အထွေထွေ အကျင့်ဆိုးများ
ဆိုးဝါးတဲ့အလေ့အကျင့်တွေက သင့်သွားတွေရဲ့ ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ ဆိုးဝါးတဲ့အလေ့အကျင့်တွေဖြစ်တဲ့
လက်သည်းကိုက်ခြင်းဟာ တကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းမှုကို ထိခိုက်စေယုံသာမက သင့်ရဲ့လက်သည်းအလှကိုလည်း ပျက်စီးစေပါတယ်။ ခံတွင်းရောဂါတွေကိုလည်း ကူးစက်စေနိုင်တဲ့အတွက် လက်သည်းကိုက်ခြင်းကို ရှောင်ကျဉ်ပေးပါ။
ကလေးတွေအတော်များများ လက်မစုပ်တတ်ကြပြီး တချို့လူကြီးတွေမှာတောင်မှ အခုလိုအလေ့အကျင့် ရှိနေတတ်ပါတယ်။ လက်မစုပ်ခြင်းဟာ သွားတွေကိုအရှေ့သို့ ခေါလာစေပြီး အစားအစာစားတဲ့အခါတွေမှာလည်း ပြဿနာတွေကို ကြုံတွေ့စေနိုင်ပါတယ်။
သွားကြိတ်ခြင်းဟာ အိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်မှာ ဖြစ်လေ့ရှိတတ်ပြီး ပျောက်ကင်းအောင်လုပ်ဖို့ အတော်ကိုခက်ခဲပါတယ်။ စိတ်ဖိစီးမှုများတဲ့အချိန်တွေမှာဆိုရင် သွားကြိတ်တာဟာ ပိုမိုဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။ ညအိပ်တဲ့အခါ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးဝတ်စုံတွေကိုဝတ်ခြင်း နူးညံ့တဲ့အစားအစာတွေကို မအိပ်ခင်စားခြင်း စတဲ့အလေ့အကျင့်တွေကို ပြုလုပ်ပေးပါ။
သွားတိုက်ပုံမမှန်ခြင်းဟာ သွားတွေကိုရေရှည်ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ သွားတိုက်နည်းအမှားများကတော့
သွားကိုကြမ်းတမ်းစွာတိုက်ခြင်းဟာ သွားဖုံးတွေနဲ့ သွားရဲ့ကြွေလွှာတွေကို ပျက်စီးစေနိုင်ပါတယ်။
(၂) မနက်စာမစားခင်မဟုတ်ပဲ စားပြီးမှတိုက်ခြင်း
မိုးလင်းတာနဲ့ သွားတိုက်တဲ့အလေ့အကျင့်ကို ပြုလုပ်ပေးသင့်ပြီး တခုခုစားပြီးမှ သွားတိုက်ခြင်းကို ရှောင်ရှားပါ။ သင့်ရဲ့ခံတွင်းမှာ
ဘက်တီးရီးယားတွေ တညလုံးရှိနေတာကြောင့် နိုးနိုးချင်းသွားတိုက်ပြီးမှ အစားစားပါ။
(၃) စားပြီးတာနဲ့ သွားတိုက်ခြင်း
တချို့က အစားစားပြီးတာနဲ့ သွားတိုက်တတ်ကြပါတယ်။ ဒီလိုအလေ့အကျင့်ဟာ မှားယွင်းတယ်လို့ပြောပါရစေ။ အက်ဆစ်ဓါတ်များတဲ့
အစားအစာတွေကိုစားပြီး သွားတန်းတိုက်ခြင်းကြောင့် သင့်သွားရဲ့ကြွေလွှာတွေကို လွယ်ကူစွာပျက်စီးစေနိုင်ပါတယ်။
(၄) မကာကွယ်ထားတဲ့ သွားတိုက်တံနဲ့ သွားတိုက်ခြင်း
သွားတိုက်တံကို မဖုံးအုပ်ထားးတဲ့ အခြားသူတွေရဲ့သွားတိုက်တံတွေနဲ့ အတူတူထားရှိခြင်းဟာ ခံတွင်းရောဂါတွေကို ကူစက်စေနိုင်ပါတယ်။ ဘက်တီးရီးယားတွေဟာ လေထဲမှာရှိနေတာကြောင့်လည်း ဖြစ်ပွားနိုင်ပါတယ်။
၈။ အချိုများတဲ့ အစားအစာတွေကိုစားခြင်း
အချိုများတဲ့ အစားအစာတွေကို လွန်ကျွံစွာစားသုံးခြင်းကြောင့် ကလေးငယ်တွေမှာ သွားပိုးစားခြင်း အဖြစ်များပါတယ်။ ဒါတင်မက လူကြီးတွေရဲ့ သွားမှာပါ ထိခိုက်စေနိုင်တာကြောင့် အချိုတွေကိုအလွန်အကျွံစားသုံးခြင်းကို ရှောင်ကျဉ်ပါ။
၉။ အစားအစာမဟုတ်တာတွေကို ဝါးခြင်း
အချို့လူတွေဟာ အစားအစာမဟုတ်ပဲ အခြားအရာတွေကို စိတ်လွတ်ကိုယ်လွတ် ဝါးနေတတ်တဲ့ အလေ့အကျင့်ရှိနေတတ်ကြပါတယ်။ သင်ကိုယ်တိုင်လည်း ခဲတံကိုပဲဖြစ်ဖြစ် စာရွက်တွေကိုပဲဖြစ်ဖြစ် ဝါးနေနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုအလေ့အကျင့်တွေဟာ သွားအတွက်မကောင်းဖူးဆိုတာကို
အစိမ်းရောင်အလင်းတန်းလေးတွေ့လို့ စူးစမ်းကြည့်ရမှ ကံကောင်းသွားတဲ့ ဇနှီးမောင်နှံ
သှားဖကျဆိုငျရာ သမားတျောရဲ့အကွံပွုခကျြအရ သငျ့ရဲ့သှားကနျြးမာရေးအတှကျ ဘယျတော့မှမလုပျသငျ့တဲ့ အရာ(၉) ခကျြ
သှားကနျြးမာရေးဟာ ကြှနျတျောတို့ခန်ဓာကိုယျရဲ့ အလုံးစုံကနျြးမာရေးတှထေဲက အရေးအကွီးဆုံး အရာတဈခုဖွဈပါတယျ။ လူအတျောမြားမြားကတော့ သှားကနျြးမာရေးအတှကျ ခံတှငျးသနျ့ရှငျးရေုးကို လိုကျနာကွသျောလညျး သတိမထားတဲ့ အပွုအမူတခြို့က သငျ့အံသှားတှရေဲ့ ကနျြးမာရေးကို ဆိုးရှားစှာထိရောကျစပေါတယျ။ တကယျလို့သငျ့ရဲ့သှားတှမှော ပွဿနာရှိနရေငျလညျး သိပျပွီးစိုးရိမျစရာ မလိုပါဘူး။ ယခုဖျောပွမယျ့ သှားဖကျဆိုငျရာသမားတျောရဲ့ အကွံပေးတှကေ သငျ့အတှကျအထောကျအကူဖွဈစပေါလိမျ့မယျ။
၁။ အရောငျရငျ့တဲ့အရညျတှကေို မြားပွားစှာသောကျသုံးခွငျး
အရောငျရငျ့တဲ့ အရညျတှမှော pH ပမာဏအလှနျနညျးပါးစှာ ရှိနပေါတယျ။ ဒီလို နညျးပါးခွငျးဟာ အကျဆဈဓာတျပိုမိုဖွဈစပွေီး သှားတှကေိုဆိုးဆိုးဝါးဝါး ထိခိုကျစပေါတယျ။ ဒါကွောငျ့ pH ပမာဏနညျးပါးတဲ့အရညျတှကေို ရှောငျကဉျြပွီး pH ပမာဏမွငျ့မားတဲ့အရညျတှကေို ပိုမိုသောကျသုံးပေးပါ။
ကျောဖီဟာ အရမျးကိုအခဉျြပေါကျစပွေီး အရောငျရငျ့တာကွောငျ့ သငျ့ရဲ့သှားတှကေိုလညျး ဝါစပေါတယျ။ အလှနျအကြှံသောကျသုံးလြှငျ သှားတှပေိုပွီး သိသိသာသာ အရောငျပွောငျးလာတာကို တှမွေ့ငျရမှာပါ။ ဒါပမေယျ့ သတငျးကောငျးကတော့ ကျောဖီကွောငျ့ဖွဈတဲ့ သှားအစှနျးအထငျးတှကေို ခြှတျရတာ အခွားအရညျတှကွေောငျ့ အစှနျးတှကေိုခြှတျရတာထကျ ပိုလှယျကွောငျး ဆရာဝနျတှကေ ဆိုပါတယျ။
ဝိုငျအနီဟာ ဘယျလောကျထိစှနျးထငျးစကွေောငျး လူတိုငျးသိပွီးသားပါ။ ဝိုငျအနီရ့ အကျဆဈဓါတျက သငျ့ရဲ့သှားတှကေို ပိုပွီးဝါကငျြစနေိုငျပါတယျ။ ဆိုးဆေးတှလေညျး ပါဝငျတာကွောငျ့ အလှနျအမငျးသောကျသုံးမှုကို ဆငျခွငျပေးပါ။
ဝိုငျးအဖွူဟာ အဖွူရောငျဖွဈတဲ့အတှကျ သငျ့ရဲ့သှားတှကေို မထိခိုကျစနေိုငျဘူးလို့ မထငျပါနဲ့။ သူ့မှာရှိတဲ့အကျဆဈဓါတျက သှားရဲ့ကွှလှောတှကေို ပကျြစီးစနေိုငျပါတယျ.
ရခေဲဝါးခွငျးဟာ ကြောကျတုံးကိုကိုကျသကဲ့သို့ သငျ့ရဲ့သှားအတှကျ အလှနျအမငျးထိခိုကျစကွေောငျး အမရေိကနျသှားဖကျဆိုငျရာ ပွောခှငျ့ရသူတဈဦးက ဆိုပါ။
လူရဲ့သှားတှဟော အစားအစာတှအေတှကျ သငျ့တျောသျောလညျး ရခေဲဝါးခွငျးအတှကျတော့ လုံးဝမသငျ့တျောပါဘူး။ ဒီလိုမကွာခဏဝါးခွငျးကွောငျ့ သှားကိုကျခွငျးနဲ့ တဈရှုးတှပေကျြစီးခွငျးတှကေို ဖွဈစနေိုငျပါတယျ။
၆။ အထှထှေေ အကငျြ့ဆိုးမြား
ဆိုးဝါးတဲ့အလအေ့ကငျြ့တှကေ သငျ့သှားတှရေဲ့ ကနျြးမာရေးကို ထိခိုကျစနေိုငျပါတယျ။ ဆိုးဝါးတဲ့အလအေ့ကငျြ့တှဖွေဈတဲ့
လကျသညျးကိုကျခွငျးဟာ တကိုယျရညျသနျ့ရှငျးမှုကို ထိခိုကျစယေုံသာမက သငျ့ရဲ့လကျသညျးအလှကိုလညျး ပကျြစီးစပေါတယျ။ ခံတှငျးရောဂါတှကေိုလညျး ကူးစကျစနေိုငျတဲ့အတှကျ လကျသညျးကိုကျခွငျးကို ရှောငျကဉျြပေးပါ။
ကလေးတှအေတျောမြားမြား လကျမစုပျတတျကွပွီး တခြို့လူကွီးတှမှောတောငျမှ အခုလိုအလအေ့ကငျြ့ ရှိနတေတျပါတယျ။ လကျမစုပျခွငျးဟာ သှားတှကေိုအရှသေို့ ခေါလာစပွေီး အစားအစာစားတဲ့အခါတှမှောလညျး ပွဿနာတှကေို ကွုံတှစေ့နေိုငျပါတယျ။
သှားကွိတျခွငျးဟာ အိပျပြျောနတေဲ့အခြိနျမှာ ဖွဈလရှေိ့တတျပွီး ပြောကျကငျးအောငျလုပျဖို့ အတျောကိုခကျခဲပါတယျ။ စိတျဖိစီးမှုမြားတဲ့အခြိနျတှမှောဆိုရငျ သှားကွိတျတာဟာ ပိုမိုဖွဈလရှေိ့ပါတယျ။ ညအိပျတဲ့အခါ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးဝတျစုံတှကေိုဝတျခွငျး နူးညံ့တဲ့အစားအစာတှကေို မအိပျခငျစားခွငျး
သှားတိုကျပုံမမှနျခွငျးဟာ သှားတှကေိုရရှေညျထိခိုကျစနေိုငျပါတယျ။ သှားတိုကျနညျးအမှားမြားကတော့
သှားကိုကွမျးတမျးစှာတိုကျခွငျးဟာ သှားဖုံးတှနေဲ့ သှားရဲ့ကွှလှောတှကေို ပကျြစီးစနေိုငျပါတယျ။
(၂) မနကျစာမစားခငျမဟုတျပဲ စားပွီးမှတိုကျခွငျး
မိုးလငျးတာနဲ့ သှားတိုကျတဲ့အလအေ့ကငျြ့ကို ပွုလုပျပေးသငျ့ပွီး တခုခုစားပွီးမှ သှားတိုကျခွငျးကို ရှောငျရှားပါ။ သငျ့ရဲ့ခံတှငျးမှာ ဘကျတီးရီးယားတှေ တညလုံးရှိနတောကွောငျ့ နိုးနိုးခငျြးသှားတိုကျပွီးမှ အစားစားပါ။
(၃) စားပွီးတာနဲ့ သှားတိုကျခွငျး
တခြို့က အစားစားပွီးတာနဲ့ သှားတိုကျတတျကွပါတယျ။ ဒီလိုအလအေ့ကငျြ့ဟာ မှားယှငျးတယျလို့ပွောပါရစေ။ အကျဆဈဓါတျမြားတဲ့ အစားအစာတှကေိုစားပွီး သှားတနျးတိုကျခွငျးကွောငျ့ သငျ့သှားရဲ့ကွှလှောတှကေို လှယျကူစှာပကျြစီးစနေိုငျပါတယျ။
(၄) မကာကှယျထားတဲ့ သှားတိုကျတံနဲ့ သှားတိုကျခွငျး
သှားတိုကျတံကို မဖုံးအုပျထားးတဲ့ အခွားသူတှရေဲ့သှားတိုကျတံတှနေဲ့ အတူတူထားရှိခွငျးဟာ ခံတှငျးရောဂါတှကေို ကူစကျစနေိုငျပါတယျ။ ဘကျတီးရီးယားတှဟော လထေဲမှာရှိနတောကွောငျ့လညျး ဖွဈပှားနိုငျပါတယျ။
၈။ အခြိုမြားတဲ့ အစားအစာတှကေိုစားခွငျး
အခြိုမြားတဲ့ အစားအစာတှကေို လှနျကြှံစှာစားသုံးခွငျးကွောငျ့ ကလေးငယျတှမှော သှားပိုးစားခွငျး အဖွဈမြားပါတယျ။ ဒါတငျမက လူကွီးတှရေဲ့ သှားမှာပါ ထိခိုကျစနေိုငျတာကွောငျ့ အခြိုတှကေိုအလှနျအကြှံစားသုံးခွငျးကို ရှောငျကဉျြပါ။
၉။ အစားအစာမဟုတျတာတှကေို ဝါးခွငျး
အခြို့လူတှဟော အစားအစာမဟုတျပဲ အခွားအရာတှကေို စိတျလှတျကိုယျလှတျ ဝါးနတေတျတဲ့ အလအေ့ကငျြ့ရှိနတေတျကွပါတယျ။ သငျကိုယျတိုငျလညျး ခဲတံကိုပဲဖွဈဖွဈ စာရှကျတှကေိုပဲဖွဈဖွဈ ဝါးနနေိုငျပါတယျ။ ဒီလိုအလအေ့ကငျြ့တှဟော သှားအတှကျမကောငျးဖူးဆိုတာကို
Previous articleအစိမ်းရောင်အလင်းတန်းလေးတွေ့လို့ စူးစမ်းကြည့်ရမှ ကံကောင်းသွားတဲ့ ဇနှီးမောင်နှံ
Next articleအခက်မသင့်ရင် အဆိပ်သင့်ပြီး လူကိုအန္တရာယ်ပေးစေနိုင်တဲ့ ငါးရှဉ့်စားသုံးခြင်းအကြောင်း